जनताको तीब्र विकासको आकांक्षा पूरा गर्न भूमिका निर्वाह गर्नेछौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / जनताको तीब्र विकासको आकांक्षा पूरा गर्न भूमिका निर्वाह गर्नेछौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता May 8, 2019	0 162 Views
तुलसीराम पुन ‘सुवास’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाङका सचिव
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी एकता प्रक्रिया करिव टुंगोमा पुगेको छ। पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाउदा नेता, कार्यकर्तामा रहेको उत्साह मर्ने अवस्था आएको गुनासो आइरह“दा भर्खरै जिल्लाको नेतृत्व पाउनुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला सचिव तुलसीपुराम पुन ‘सुवास’सग युगबोधकर्मी जे.एन.सागरले पार्टी एकता र सरकार सञ्चालनका विषयमा गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहा“प्रस्तुत गरिएको छ। –सम्पादक
पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन अझै ढिलाइ हुन्छ कि ?
हुन त एकता घोषणाको तीन÷चार महिनामै सक्ने योजना थियो। खासगरी जिल्लाहरुको अध्यक्ष र सचिव चयन गर्ने र केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारीका विषयमा अलि बढी छलफल भयो र पछाडि धकेलियो त्यो स्वाभाविक पनि थियो। दुई ठूला पार्टीलाई एक बनाउने कुरा सजिलो थिएन। भावावेशमा विनातयारी छिटो गरेर देखाउन पनि गाह्रो नै थियो। त्यसकारणले ढिलै भए पनि एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दैछ। सन्तोषजनक काम भइरहेको छ।
हत्तपत्त गर्दा समस्या आउथ्यो होला तर ढिलो गर्दा पनि एकतापछिको ऊर्जा हराएन र ?
शुरुमा पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रम ठाउ“ ठाउ“मा गर्ने भन्ने योजना थियो केन्द्रको। निर्णयमा ढिलाइ हु“दा ती आमसभा हुन सकेनन्। त्यसले शुरुमा देखिएको उत्साह केही कम भएकै हो। तर अहिले एकताको अन्तिम प्रक्रिया चलिरहेको छ। यसले नेता, कार्यकर्ताहरुमा त्यो ऊर्जा पलाइसकेको छ।
जनयुद्धका कमाण्डर, आज सत्ताधारी पार्टीको कमाण्डरको जिम्मेवारी के छ फरक ?
हिजो अधिकार प्राप्तिको लडाइ“मा थियौं हामी। हामीस“ग विभिन्न राष्ट्रिय एजेण्डा थिए। खासगरी संविधानसभा, राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनालगायतका एजेण्डा लिएर खुला, भूमिगत, शान्तिपूर्ण, सशस्त्र संघर्ष गरेर यहा“सम्म आइपुगेका छौं। जनयुद्ध हाम्रो पृष्ठभूमि हो। तर अहिले हामी भिन्न परिस्थितिमा छौं। हिजो हामी युद्धमै भए पनि त्यो पनि राजनीति नै हो। राजनीति अधिकार प्राप्तिकै लागि हो। त्यो शान्तिपूर्ण पनि हुनसक्छ, सशस्त्र पनि हुनसक्छ। यो सर्वव्यापी मान्यता नै हो। अहिले हेर्दा शान्तिपूर्ण भए पनि अदृश्य युद्धमै छौं हामीहरु। हामीमाथि दुश्मनहरुले विभिन्न प्रकारले घेरा हाल्ने, असफल बनाउने, जालझेलमा फसाउने र राजनीतिकरुपले हामीलाई सखाप पार्ने काम गरिरहेका छन्। यस्ता जालझेलका विरुद्ध हामी युद्धमै छौं। त्यसैले अहिलेको अवस्था पनि सजिलो छैन। शान्तिपूर्ण भए पनि जोखिमपूर्ण नै छ। त्यस्तै हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध र बलियो बनाएर लैजाने, हामी आफैले हिजो उठाएका एजेण्डालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, विगतमा प्रतिपक्षले गरेभन्दा राम्रो काम कसरी गर्ने चुनौती अहिले पनि उत्तिकै छ। यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न पार्टीको निर्देशनमा, पार्टीको विचार र मार्गदर्शनमा टेकेर अघि बढ्न सक्छौं।
तीनवटै तहका सरकार आफ्ना भएकाले गरिदेखाउने अवसर पनि आएको छ नि ?
त्यति सहज त छैन। किनभने विभिन्न प्रकारका पुराना सोच, संस्कार र संस्कृतिमा हामी जकडिएका छौं। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हाम्रो सोच उस्तै छ। कार्यशैली उस्तै छ। त्यसैले हाम्रो विचारअनुसारको काम हुन सकेको छैन। गर्नै नखोजेको त होइन फेरि। त्यो हिसावले काम गर्न साथ, सहयोग र संस्कार आवश्यक पर्छ। भाषण गरेजस्तो छैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न हामी सक्छौं।
सत्ताको सदुपयोग गर्दा थप बल पुग्ला नि तपाइ“हरुलाई काम गर्न ?
हो। तर अहिलेका सरकारलाई विभिन्न खालका ऐन, कानुन बनाउन समय लाग्यो। कतिपय बन्दै पनि होलान्। ती ऐन, कानुन अनुसार जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने कुरामा नया“ व्यवस्थामा अभ्यस्त हुन सकेको अवस्था छैन। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुरामा त हामीलाई सहज नै छ। अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन। सोही अनुसार हिजो भन्दा आज विकासका काम तीब्र गतिमा भइरहेका छन्। तर हामीलाई चुनौती भनेको सामाजिकरुपमा रहेको भेदभाव, असमानता, कुरीति, थिचोमिचो, आर्थिक असमानता, वेरोजगारीलगायतका थुप्रै सामाजिक विकासका एजेण्डाहरु छन् । यी हाम्रा लागि चुनौतीका रुपमा देखिएका छन्। कसरी यी विषयमा काम गर्ने भन्ने चिन्तन, मनन भइरहेका छन् र यी समस्या समाधान गर्न ऐन, कानुनको निर्माण गर्न सरकारले सही निर्णय गर्न सक्यो भने हामीले काम गर्न पनि सक्छौं। हामीले समाजवादी व्यवस्थामा पुग्ने लक्ष बनाएका छौं। संविधानले पनि त्यसलाई निर्देश गरेको छ भने पार्टी र सरकारले पनि सोहीअनुसारको उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यसका लागि हामीले स्वार्थ छोड्ने र त्यागको भावनाको विकास गरेर काम गर्न जरुरी छ।
सरकारहरुले काम गर्न आट गरेनन् भन्ने जनगुनासो छ नि ?
जनतामा गुनासो आउनु स्वाभाविक हो। हामीले प्राप्त गरेको जनमतलाई हेरेर जनताले यति धेरै आशा गरे कि अब दुई तिहाइ नजिकको सरकारले सबै अभाव र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ भन्ने लाग्यो। तर बितेको एक वर्षमा ती आशा पूरा गर्न सकेको स्थिति छैन। त्यसले गर्दा यसले पनि आशा पूरा गर्न सकेन भन्ने गुनासो हुनु स्वाभाविक हो। अर्को कुरा, दुई तिहाइको सरकारले त काम गर्न सकेन भने अब कसले सक्छ त काम गर्न ? जनताले भविष्यप्रतिको चिन्ता र निराशा व्यक्त गरेको अवस्था हो। तर मेरो भनाइ के हो भने नया“ संरचनासहितका सरकारहरुले पहिलो एक वर्षमा आधार निर्माणको काम गरेका छन्। देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनको निर्माणदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना तयार गर्ने र कतिपय प्रदेशका राजधानी र नामाकरणको काम अझै बा“की नै छ। त्यसैले बितेको समय आधार निर्माण वर्षको रुपमा रह्यो। अबका दिनहरुमा तीब्रस्तरको आर्थिक बृद्धि, समृद्धि र उचित योजना निर्माणका लागि सरकार र पार्टीले ध्यान केन्द्रित गर्नेछन्। जसले जनतामा पैदा भएको निराशालाई क्रमशः उत्साहमा बदल्नेछ।
अब तीन वर्ष मात्रै बाकी छ नि ?
काम गर्नका लागि त्यो समय काफी छ। हामी सबै मिलेर बा“की रहेका आर्थिक वर्षहरुलाई सदुपयोग गरेर जनताको तीब्र विकासको आकांक्षा पूरा गर्नेछौं।
तेरो मेरो गर्दा गर्दै बित्ने हो कि ?
त्यस्तो हु“दैन। पार्टीलाई कसरी राम्रो बनाउने, सरकारलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर आफ्ना विचार र धारणाहरु दिने कुरालाई नकारात्मकरुपमा लिनुह“ुदैन। त्यो पार्टी निर्माण र सरकारको प्रभावकारी कामका लागि जरुरत पनि छ। सबैको विचार, सबैको क्षमता प्रयोग गरेर नया“ काम गर्ने हो। अहिले पार्टीभित्रको संघर्ष, अन्तरविरोध अथवा सरकारमा व्यस्त भएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने चाहि“ होइन। छैन। पार्टी भित्रको समस्या पार्टीले नै हल गरिराखेको छ। जे जति समस्या आएका छन् वा भविष्यमा पनि आउलान् । किनभने पार्टी भनेको विभिन्न विचार, सिद्धान्त, प्रवृत्तिलाई मन्थन गर्दै एउटा सही विचार, सही नीति निर्माण गर्ने थलोको रुपमा पार्टीलाई लिइराखेका छौं। पार्टीमा आइरहेका विचार, समस्या वा विवादहरुलाई पार्टीले नै हल गर्छ र पार्टीले हल गर्ने भएकाले त्यसको प्रभाव वा छाया“ सरकारमा पर्न दिदैन। सरकार अहिले गतिका साथ वढिरहेकै छ।
केन्द्रमा समस्या छैन होला तर स्थानीय सरकारको बोली र व्यवहार मिलेन भन्ने कुरा साचो होइन ?
स्थानीय सरकारहरु निकै शक्तिशाली छन्। स्वायत्त सरकार हुन्। स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षमताअनुसार काम देखाउने कुरामा विविधतता छ। किनभने स्वतन्त्र सरकारको रुपमा क्रियाशील रहेको हुनाले सरकारमा हुने जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता, समर्पण, मिलाएर लैजान सक्ने कलामा भरपर्ने भएकाले सबै स्थानीय सरकारहरुको एउटै प्रकारको व्यवहार नहुन सक्छ। स्थानीय सरकारहरुले जे जति काम गरेका छन्। मलाई त के लाग्छ भने राम्रै काम गरेका छन्। उनीहरुका समस्याका सन्दर्भमा पार्टी र सरकारको सम्बन्ध अझै जोडिएको अवस्था छैन। पार्टीको स्थानीय संरचना तयार बनाउन ढिलाइ भएका कारणले सरकारलाई दिन मन लागेका सुझाव, सल्लाह दिन सकिएको छैन र जनप्रतिनिधिहरुले पनि स्थानीय दल वा पार्टीहरुस“ग सुझाव लिने काम गर्नुभएको छैन। मूल कुरा हाम्रो पार्टी संरचना नबनेकै कारणले यो खालको समस्या देखिएको हो। स्थानीय तहस“गको सहकार्य गर्दै त्यहा“ आउने जनताका गुनासाका विषयमा पनि क्रमशः छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछांै।
स्थानीय सरकारहरु किसानहरुलाई मल, विउ होइन, धेरै खाएर पेट घटाउनेका लागि योग चलाउ“दै हि“डेको देखिन्छ त ? पार्टीले सुझाव दिन कमिटी कुरेर बस्नुपर्ने हो र ?
त्यसो होइन। आवश्यक सुझाव अनौपचारिकरुपमा आदानप्रदान त हुन्छ नै। औपचारिकरुपमा सुझाव आदानप्रदान हुन कमिटी गठनमा ढिलाइ हु“दा समस्या छ भनेको हो मैले। खासगरी सबै स्थानीय तहले तपाइ“ले भनेजस्तो गरेका छैनन्। कतिले त किसानहरुलाई मल, विउ दिन बजेटको व्यवस्थापन गरेका पनि छन्। कतिपय तहमा त्यतापट्टि ध्यान नपुगेको जस्तो देखिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश र दाङ पनि कृषिमा निर्भर भएकाले दाङका स्थानीय सरकारले मल, विउलगायतका कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ।
स्थानीय सरकार र पार्टीबीच समीक्षा नै हुदैनन् ?
समीक्षाको शुरुवात गरिएको छ। जिल्ला कार्यदलले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुस“ग छलफल गर्ने भन्ने कार्यक्रम बनेको थियो । अहिले अध्यक्ष,सचिवको घोषणा भइसकेपछि त्यो काम हुन सकेको छैन। तर व्यक्तिगतरुपले सरसल्लाह, सुझाव लिनेदिने भए पनि औपचारिकरुपमा हुन सकेको छैन। पालिकास्तरको पार्टी कमिटीले स्थानीय सरकारस“ग छलफल, समन्वयको काम शुरु गरेको छ। जुन खालको दूरी थियो अब हटेर जान्छ।
जनताले खोज्दा पार्टी र सरकार भेटिन्छन् अव ?
जनतामै छन् पार्टी र सरकार। अब थप समन्वय गरेर अघि बढ्ने वातावरण बन्दैछ। फेरि सरकार एक्लैले केही गर्न सक्ने ह“ुदैन। जनताको साथ सहयोग र नेकपाको सहयोगले नै स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्छन्। त्यतिमात्रै होइन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीन तहकै सरकारलाई पार्टीको सहयोग चाहिन्छ र तत् तहका पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। पार्टीको सहयोगविना परिणाम ल्याउन सकिदैन। त्यसमा हामी गम्भीर छौं र सोही अनुसार काम गर्नेछौं।
दाङको विकासमा अगुवाइ गरेको देख्न पाइन्छ ?
अवश्य पनि। अहिले पनि जिल्लाको विकासका लागि थुप्रै काम भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो हिसावले विकासको काम गरिरहेका छन्। प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका योजना कार्यान्वयनमा पनि तीब्रता आइरहेको छ। हामीले तीनवटै स्तरका सरकारका बजेट र योजनाका विषयमा अहिले पनि छलफल गरिरहेका छौं। खासगरी केन्द्रस्तरका योजनालाई केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुमार्फत योजना अघि बढाइएको छ भने प्रदेशस्तरका योजनाहरुलाई प्रदेशसभा सदस्य र मुख्यमन्त्रीमार्फत अघि बढाएका छांै र स्थानीय स्तरका योजनालाई पालिकास्तरबाटै हामीले समन्वय गरिरहेका छौं। त्यसमा जिल्ला समन्वय समितिले पनि आवश्यक समन्वयको काम गरिरहेको अवस्था छ। दाङ जिल्लाको समग्र विकासको सवालमा समन्वय समितिले सर्वदलीय छलफलदेखि लिएर गोष्ठी आयोजना गर्ने काम गरिरहेको छ भने त्यसमा पार्टीले पनि सहयोग गर्ने र दाङको समग्र विकासका लागि खाका बनाएर अघि बढ्नेछौं।
दुई पार्टी एक भयो । नेता, कार्यकर्ताबीचको भावनात्मक एकता सजिलो छ ?
सबैभन्दा पहिले त सांगठनिक एकतालाई टुंग्याउनुपर्नेछ। गाउ“, टोल र इकाईसम्म एकतालाई पु¥याउनुपर्नेछ। त्यसपछि आ–आफ्ना पृष्ठभूमिमा रहेका हामीहरु एकै ठाउ“मा बसेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ। हामीले मनहरुलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ। भावनामा जोडिनु जरुरी छ। यी सबै कुरालाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिदै एउटा जोश र जागर पैदा गर्नका लागि योजना बनाउ“दैछौं। समन्वय, सहकार्य गर्ने योजना बनाउ“दैछांै र पार्टीलाई हिजो दुईवटा पार्टी थियो र ? भन्ने अवस्थामा लैजानेछौं।
दुई कमिटी एक बनाउ“दा धेरैलाई जिम्मेवारीबाट निकाल्नुपर्ने होला। असन्तुष्टि त झन बढ्ने देखिदैन र ?
हिजोका दुईवटा जिल्ला कमिटीलाई एउटा बनाउन हिजो जिम्मेवारीमा रहनुभएका साथीहरुलाई अहिले समेट्न सकिएको छैन। छुट्नु भएको छ। तर हामीले त्यस्ता साथीहरुलाई कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिएर काममा खटाउछौं। सबैले अपनत्व महसुस गर्नेगरी कमिटीहरु निर्माण गर्छौं। र, फेरि यो कमिटी भनेको एकताको तयारी गर्न बनाइएको कमिटी भएकाले छिटै अधिवेशन पनि हुन्छन्। केही गरी साथीहरु छुटिहाल्नु भएछ भने पनि छिट्टै एकता सम्मेलन हुन्छन् र नया“ कमिटीमा समावेश गरेर अघि बढिनेछ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो बेला पद भन्दा पार्टी एकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने बेला हो। ठूलो र एकताबद्ध पार्टी बनाउने अभियान भएकाले सबै साथीहरुलाई उत्साहका साथ पार्टी एकता प्रक्रियालाई सफल बनाउन अपिल गर्न चाहन्छु।
Previous: दाङ घोषणापत्रसहित राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
Next: मकै पिस्न भारतको बालापुर